PixelBot အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
PixelBot အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
PixelBot အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၀၇:၀၃ ၀၇:၀၃၊ ၄ မတ် ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ကုလသမဂ္ဂ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ‎ r2.7.3) (Robot: Modifying it:Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale to it:Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
၁၉:၁၃ ၁၉:၁၃၊ ၃ မတ် ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး အောက်တိုဘာ ‎ r2.7.3) (Robot: Modifying ang:Ƿinterfylleþ to ang:Winterfylleþ
၁၇:၀၅ ၁၇:၀၅၊ ၂ မတ် ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (Robot: Modifying ku:Zêlanda Nû to ku:Nû Zelenda
၀၃:၄၁ ၀၃:၄၁၊ ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၅‎ အရေးမကြီး မင်စီးယပ်စ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ta:மென்சியசு
၁၅:၀၈ ၁၅:၀၈၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အရေးမကြီး စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - tr:Makine elemanı
၀၇:၀၉ ၀၇:၀၉၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၇၉‎ အရေးမကြီး အသုံးပြုသူ:PixelBot ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - lez:Участник:PixelBot, min:Pengguna:PixelBot, vep:Kävutai:PixelBot လက်ရှိ
၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၂၂:၄၈ ၂၂:၄၈၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ilo:Kabo Berde
၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၁၉:၂၀ ၁၉:၂၀၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အီတလီဘာသာစကား ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - mg:Fiteny italiana
၁၆:၄၉ ၁၆:၄၉၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အစ္စရေးနိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - mr:इज्राएल
၁၅:၂၆ ၁၅:၂၆၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈‎ အရေးမကြီး ဂါလာပါဂိုးကျွန်းများ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - mr:गालापागोस द्वीपसमूह
၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၂၃:၀၅ ၂၃:၀၅၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အရေးမကြီး ဖာမီယမ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - am:ፌርሚየም
၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၁၇:၃၉ ၁၇:၃၉၊ ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉‎ အရေးမကြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ur:انگریزی زبان
၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၈:၄၄ ၀၈:၄၄၊ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး C (ပရိုဂရမ်းမင်း ဘာသာစကား) ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - mr:सी (आज्ञावली भाषा)
၁၅:၂၈ ၁၅:၂၈၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၀‎ အရေးမကြီး ဗူးခရက်မြို့ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ur:بخارسٹ
၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၀:၅၆ ၀၀:၅၆၊ ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ အရေးမကြီး မုခ်ခုံး ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - th:ช่องโค้ง
၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
၂၀:၅၅ ၂၀:၅၅၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၂‎ အရေးမကြီး ဝါပင် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ဖယ်ရှားနေသည် - pa:ਬੋਲਗਾਰਡ ਨਰਮਾ
၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
၂၂:၀၃ ၂၂:၀၃၊ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ie:Etiopia
၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၀:၄၁ ၀၀:၄၁၊ ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး ဝေလနိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - fa:ویلز
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၉:၁၈ ၁၉:၁၈၊ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃‎ အရေးမကြီး ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - gn:Urano
၂၃:၁၀ ၂၃:၁၀၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁‎ အရေးမကြီး သက်ဆင် ရှင်နာဝပ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - zh:达信·钦那瓦
၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၂
၀၉:၃၄ ၀၉:၃၄၊ ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၂‎ အရေးမကြီး ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ia:San Francisco
၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၂
၀၅:၁၄ ၀၅:၁၄၊ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၆‎ အရေးမကြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - en:National Unity Party (Burma)
၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၂
၂၃:၀၅ ၂၃:၀၅၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး မွန်ဂိုအင်ပါယာ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ckb:ئیمپڕاتۆرێتیی مەغۆل
၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၂
၁၉:၅၅ ၁၉:၅၅၊ ၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - tl:Gineang Ekwatoriyal
၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၁၄:၂၂ ၁၄:၂၂၊ ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅‎ အရေးမကြီး ဗင်းဆင့် ဗန်ဂိုး ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - bcl:Vincent van Gogh
၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၁၄:၄၉ ၁၄:၄၉၊ ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၀‎ အရေးမကြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ky:Ультракызгылт көк нуру
၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၁၅:၅၉ ၁၅:၅၉၊ ၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈‎ အရေးမကြီး ဂြိုဟ်တု ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ast:Satélite (dixebra)
၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၀၁:၁၆ ၀၁:၁၆၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၀‎ အရေးမကြီး မိုက်ကယ် အော့တို ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - es:Michael Otto
၃၀ ဇွန် ၂၀၁၂
၀၇:၁၇ ၀၇:၁၇၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀‎ အရေးမကြီး မက္ကင်းနစ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - pt:Mecânica
၁၈:၁၁ ၁၈:၁၁၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံတော် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - pl:Flaga Mjanmy
၁၈:၀၅ ၁၈:၀၅၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈‎ အရေးမကြီး ဒိုင်ယာလက်တစ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ky:Диалектика
၂၁:၄၂ ၂၁:၄၂၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆‎ အရေးမကြီး ဘိုင်ဇန်တိုင်း အင်ပါယာ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - lez:Византий империя
၀၅:၃၈ ၀၅:၃၈၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂‎ အရေးမကြီး ဥသျှစ်ပင် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - es:Aegle marmelos
၇ ဇွန် ၂၀၁၂
၀၇:၃၄ ၀၇:၃၄၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂‎ အရေးမကြီး အေဗီရွန်းနစ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - fa:اویونیک
၁၇:၁၁ ၁၇:၁၁၊ ၆ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၂‎ အရေးမကြီး စိန်ဖြူ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - pa:ਸੰਖੀਆ/ਅਰਸਨਿਕ
၀၅:၀၅ ၀၅:၀၅၊ ၆ မေ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃၆၆‎ အရေးမကြီး အိုဆာကာမြို့ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - af, ar, az, bar, be, bg, bn, bs, ca, cs, cy, da, de, el, eo, es, et, eu, fa, fi, fo, fr, ga, gd, gl, he, hi, hr, hu, id, io, is, it, ja, ka, kl, ko, ku, la, lt, lv, …
၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၂
၀၃:၀၄ ၀၃:၀၄၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - chr:ᎠᏍᏟᏯ
၀၂:၅၉ ၀၂:၅၉၊ ၉ ဧပြီ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - lez:Австрия
၁၉:၂၄ ၁၉:၂၄၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၉‎ အရေးမကြီး Parable of the Prodigal Son ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ဖယ်ရှားနေသည် - simple:Parable of the Prodigal Son
၁၉:၂၁ ၁၉:၂၁၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၆‎ အရေးမကြီး Parable of the Lost Coin ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ဖယ်ရှားနေသည် - simple:Parable of the Lost Coin
၁၇:၂၃ ၁၇:၂၃၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး လူမှုကွန်ရက် (ရုပ်ရှင်) ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - hr:Društvena mreža (2010.)
၁၆:၁၉ ၁၆:၁၉၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး ဘုရင့်မိန့်ခွန်း (ရုပ်ရှင်) ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - hr:Kraljev govor (2010.)
၀၀:၂၁ ၀၀:၂၁၊ ၂၈ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃‎ အရေးမကြီး သံမဏိ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - dsb:Stal
၀၅:၁၅ ၀၅:၁၅၊ ၁၄ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ အရေးမကြီး ဆက်ဆိုဟွန်း ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - et:Saksofon
၇ မတ် ၂၀၁၂
၂၀:၀၃ ၂၀:၀၃၊ ၇ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄‎ အရေးမကြီး နိုဝင်ဘာ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - nah:Ic mahtlāctetl oncē mētztli
၁၂:၅၈ ၁၂:၅၈၊ ၇ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉‎ အရေးမကြီး နီဆန်း ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - nl:Nissan Motor
၁၉:၀၈ ၁၉:၀၈၊ ၆ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး နရသီဟပတေ့ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - ja:ナラティーハパテ
၅ မတ် ၂၀၁၂
၀၆:၁၇ ၀၆:၁၇၊ ၅ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၀‎ အရေးမကြီး မီခေး ပရိုခိုရော့ဗ် ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - mhr:Прохоров, Михаил Дмитриевич
၁၈:၀၉ ၁၈:၀၉၊ ၃ မတ် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး ငှက်ဖျားရောဂါ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - om:Busaa
၀၆:၃၆ ၀၆:၃၆၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး ဂျိုဟန် ဝုဖဂန် ဖွန် ဂါတာ ‎ r2.7.2) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - la:Ioannes Volfgangus Goethius
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/PixelBot" မှ ရယူရန်